I-Ford 2021 Bronco vs.Jeep Wrangler Iimpendulo zokuqala: Zithini iingcali - Ezintsha
Eyona Ezintsha Ukuphendula kwangoko kwengcali kwiFord's 2021 Bronco: Ngaba iya kuyiphucula iJeep Wrangler?
Ukuphendula kwangoko kwengcali kwiFord's 2021 Bronco: Ngaba iya kuyiphucula iJeep Wrangler?
IFron's 2021 Bronco ngumxube weembonakalo ze-retro kunye neetekhnoloji zangoku.Inkampani yeFord Motor
IAmazon prime day izivumelwano zombane
I-2021 Ford Bronco ekugqibeleni ilapha. NgoMvulo ebusuku, uFord watyhila usapho olutsha lweBronco, iSUV ethandwayo eyenziwe yaziwa ngu-O.J. USimpson ngoo-1990 kwaye wayeka ngo-1996. I-remake eyayilindelwe ngokushushu ekuqaleni yayicwangciselwe ukumiliselwa ngomhla wokuzalwa kukaSimpson ngoJulayi 9, kodwa ekugqibeleni yatyhalelwa umva kule veki ngenxa yeempikiswano ezivela kwi-intanethi.
I-Ford igcine izinto ezininzi zoyilo zakudala zeBronco endala kodwa zongeza izinto zale mihla ezinje ngezikrini zangaphakathi ezinkulu kunye nenkqubo yokuhamba yendlela enokwenziwa ngokwezifiso. I-Broncos entsha iza nezinto ezintathu ezahlukeneyo: imodeli eneminyango emibini ejongeka ngokufana kakhulu nemodeli yoqobo ye-90, inguqu eneminyango emine elungiselela incasa yale mihla kunye neBronco Sport encinci eya kwakhiwa kwiqonga lezithuthi elahlukileyo.
BONA KWAKHO: I-Tesla Stock ingaphezulu kwe-100% ngaphezulu, Lumkisa abahlalutyi abaphezulu beSitrato
Ixabiso liqala kwi- $ 29,995 yesiseko semodeli eneminyango emibini kwaye inyuke yaya kuthi ga kwi-64,995 yeedola kwimodeli yokuqala yomnyango emine ngaphambi kokhetho. (Amaxabiso kubandakanya ukuhanjiswa kwe-1,495 yeedola kunye nentlawulo yokufika.) IBronco Sport kulindeleke ukuba ifike kubathengisi ukuphela kuka-2020, ilandelwe yiBronco ngentwasahlobo elandelayo. UFord ngoku uthatha iidipozithi ezibuyiswayo ze- $ 100 zezithuthi.
Ukuvuselela imodeli yelifa kuhlala kuyinto eyingozi yokuhambisa ii-automakers. Kodwa iBronco ibe yimpumelelo yasendle ukuza kuthi ga ngoku. Ukugcinwa kweLori yokuqala eneminyango emine, apho iFord iceba ukuvelisa kuphela iiyunithi ezingama-3 500, ezithengiswe ngemizuzu yangoMvulo ebusuku. Ukuthelekisa, kuthathe umenzi weemoto ngaphezulu kweveki ukuthengisa ii-odolo zangaphambili kuhlelo olunqunyelweyo lwe-Mustang Mach-E yombane kunyaka ophelileyo.
IFord ayikhange igqabaze ngezicwangciso zazo naziphi na iombane okanye iinguqulelo ezingumxube zeBronco.
Ukufika kwayo, iBronco entsha yabonwa kwangoko njengomntu okhuphisana ne-Fiat-Chrysler's Jeep Wrangler, enye yeemoto zaseMelika ezithandwayo kakhulu ezindleleni. Ezi zimbini ii-SUV ziyafana ngobukhulu, amaxabiso kunye ne-injini specs. Babelana ngezinto ezinje ngophahla olususwayo kunye neengcango, kunye nomrhumo obanzi wezinto ezixhaswa ngumzi-mveliso.
Into enomdla kukuba, kwilinge lokugquma ukweba ezinye zeendudumo zikaBronco, uFiat-Chrysler watyhila iV8 Wrangler entsha nangoMvulo ebusuku. Isithuthi, esibizwa ngokuba yiJeep Wrangler Rubicon 392, yimoto nje yeengcinga, kodwa uJeep uthe sisalathiso sokuba umthengi weV8 inguqulelo yeWrangler uyeza kungekudala.
Zithini iingcali zeemoto:
I-2021 iFord Bronco entsha ine-Jeep Wrangler ngokucacileyo kwizithambiso zayo. Ukusuka kwinto esiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku, inethuba elihle kakhulu kuyo nayiphi na intlanganiso okanye ukubetha iWrangler. Ewe kunjalo, akukho ndlela yokuxela de sifike ukuba sizenzele ngokwethu, ke hlala ujonge ukubonakala kokuqhuba kunye nolwazi olongezelelweyo njengoko sisondela ekukhululweni kwesithuthi entwasahlobo yowama-2021.
Indawo yokujonga iimoto Edmunds
Njengokuba uphando lwethu lubonakalisile, uWrangler unesibheno esicacileyo, efumana amanqaku awomeleleyo ukwanelisa umnini (ngaphandle kwamanqaku asezantsi ovavanyo lwendlela kunye nokuthembela okungathethekiyo)… I-Bronco ayisokuze ibange ibango elifana nelityebileyo elifana neJeep, kodwa I-Broncos yeediliya zilime ezi zinto zilandelayo .. Ukuze iBronco ibe liziko lala maxesha, kufuneka izalisekise izithembiso zayo ezininzi. Kubonakala iFord inamandla, amanqaku, kunye nesitayile sokuzoba abaphulaphuli bayo abathanda ngaphandle.
- IiNgxelo zabaThengi
Lixesha elide elizayo. Imakethi ilindile kwaye ilungile. Silindele ukuba oku kuxinane kakuhle xa kuthelekiswa neWrangler.
-UJeff Schuster, umongameli waseMelika kwi-LMC yezeMoto
NgeBronco, iFord yenza ukutyhala okucacileyo kwicandelo elingaphandle kwendlela lemarike [North American] ye-SUV. Ngelixa silindele ukuba uWrangler ahlale eyinkokeli kwicandelo elingaphandle kwendlela, nangona kunjalo sibona ithuba elinomtsalane leBronco elinikwe ilifa lalo.
-Umhlalutyi weCredit Suisse uDan Levy
Ukhenketho lukaBryson olukhokelwayo lweLizwe likaShakespeare-thabatha iNdoda buqu
'I-Star Trek: I-Picard' Iifowuni zibuyela kwisiqendu esibalulekileyo 'Isizukulwana esilandelayo' malunga neDatha
USweeney kunye noWeinberg Bancoma iNtetho yeDNC njengeNtetho ye-NJ ilindele uClinton
URoy Moore ubuza ukuvimba iziphumo zoNyulo lweAlabama
erin doherty biza umbelekisi
I-dr ax evuzayo ifomula yamathumbu
iphuma nini imfazwe yeenkwenkwezi
yenze malini imali ebekelwe iinkwenkwezi
Ibhokisi yeligi yebhokisi yezobulungisa
indawo yokuthandana ngaphezulu kwe-50